Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika : Esory i Mama Sôsy dieny mbola tsy tara
Tsy misy resaka raha tsy ny raharaha mahakasika ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakondrazafy Andriatongarivo antsoin’ny vahoaka Malagasy hoe Mama Sôsy ihany no malaza hatramin’izao. Hatramin’ny mpianatra eny amin’ny CEG sy ny Lycée ary ny mpivarotra amoron-dàlana dia maneho ny heviny avokoa.Tsy tenenina intsony ny mpiasam-panjakana sy ny manampahaizana sy ny tontolo politika na mpomba na mpanohitra. Tsy kely tsy lehibe ary tsy adala sy hendry fa Mama Sôsy no resaka.
Isan’ny vaovao lehibe indrindra teto Madagasikara iny raharaha Lalatiana Rakotondrazafy sy Andry Andriatongarivo vadiny iny ary ny mpanakanto Sayda. Nanaratsy endrika ny fitondram-panjakana ankihitriny inyraharaha iny.
Amin’isika miteny izao dia tsy hay tenenina intsony ny fanehoan-kevitra isan-karazany any amin’ny tambazotra-tserasera. Mivoaka avokoa ny zavamiafina rehetra fa indrindra ny ratsy nataon’I Mama Sôsy mivad. Tonga hatrany amin’fiangaviana ny filohampirenena Andry Nirina Rajoelina hangala azy tsy ho ao amin’ny governemanta intsony. Azo lazaina fa ny 90% ny Malagasy dia mangataka ny fialan’ity ramatoa ity tsy ho minisitra intsony.
Raha miverina amin’ny tantaram-pirenena Malagasy isika dia miatomboka amin’ny zavatra toa izao no iatombohan’ny faharavan’ny fanjakana nisy hatramin’izay. Niharan’izany ingahy Philibert Tsiranana ny taona 1972, toa izany koa ingahy ny Amiraly Didier Ratsiraka ny taona 1991, Zafy Albert 1996 ary Ravalomanana Marc ny taona 2008-2009.
Amin’izao fotoana izao dia miseho indray izany amin’ny raharaha Mama Sôsy ity ka tokony handray fanampahan-kevitra maika sy hentitra ingahy Andry Rajoelina. Mitaky ny fialan’ity minisitra ity ny feom-bahoaka. Marina fa tsy tia korontana intsony ny Malagasy kanefa dia tsara ihany ny ihenoana ny feony fa ilaina izany.Hisy fiatraikany amin’ny fifidianana amin’ny taona 2023 koa izao.